अन्तत नेपाल आइपुग्यो होन्डा हर्नेट २.०, मूल्य निक्कै आकर्षक ! हे’र्नुहोस् (मुल्य सहित) – SUDUR MEDIA
July 6, 2021 AdminLeaveaComment on अन्तत नेपाल आइपुग्यो होन्डा हर्नेट २.०, मूल्य निक्कै आकर्षक ! हे’र्नुहोस् (मुल्य सहित)
सेफ्टी फिचरमा डबल पेटल डिस्क ब्रेक, सिंगल च्यानल एबीएस, गोल्डेन कलर अपसाइड डाउन फर्क, मोनोशक सस्पेन्सन, सिल्ड चेन, एलइडी हेडल्याम्प तथा टेलल्याम्प रहेको छ । हर्नेट २.० मा सेग्मेन्ट कै फर्स्ट यूएसडी फर्क रहेको छ । अगाडीको टायर ११० एमएमको छ भने पछाडीको टायर पनि सेग्मेन्ट कै फर्स्ट १४० एमएमको रहेको छ । हर्नेट २.० ले ४० किलोमिटर प्रतिलिटर माइलेज दिने कम्पनीले दावी गरेको छ । कम्पनिले यो मोटरसाइकलको मूल्य ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । होन्डा हर्नेट २.० ले २०० सीसी सेग्मेन्टका टीभीएस अपाचे आरटीआर २०० फोरभी, बजाज पल्सर एनएस २०० आदी मोटरसाइकल सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
सुजिताको श’व भेटीएको जंगलमा रिपोर्टिङ गर्न पुगेका युट्युबर भोजराज थापालाई स्थानीयहरुले लखेटे पछि ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
भोलिको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७७ साल चैत्र १९ गते बिहीबार ईश्वी सन् २०२१ अप्रिल ०१ तारिख